1949-1963 Evinrude ဂျွန်ဆင် 10 HP က Tune UP စီမံကိန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
1949-1963 Evinrude ဂျွန်ဆင် 10 HP က Tune UP စီမံကိန်း
1949-1963 Evinrude ဂျွန်ဆင် 10 HP ကပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုးကားစရာ။ အဆိုပါမော်ဒယ် number ကိုများသောအားဖြင့်အင်ဂျင် bracket ကဆိပ်ကမ်းဘက်မှာတပ်ဆင်ထားသည်။ သင်မော်ဒယ်အရေအတွက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထဲမှာသင့်ရဲ့မော်တာများအတွက်တစ်နှစ်ရှာတွေ့ မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုးကားစရာ.
ဒီမှာ အဆိုပါဖြစ်ပါသည် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း ထညှိရန်သင့် 1949-1963 Evinrude နှင့်ဂျွန်ဆင် QD 10 HP ကပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ။
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ ထညှိရန်သင့် 1952-1967 Evinrude သို့မဟုတ်ဂျွန်ဆင်3HP ကပဲ့ချိတ်မော်တော်။ ဤစာမျက်နှာကိုဓါတ်ပုံတွေအများကြီး, ဖော်ပြချက်, ဤမော်တာကောင်းမွန်စွာပြေးရပုံနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မော်တော်ပေါ်မှာညှိတက်ဖျော်ဖြေ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့်ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
ဖိအားဆီ tank အကြောင်းတစ်ဦးကသတိပေး - အဲဒီမော်တာဖိအားပေးထားတဲ့လောင်စာလှောင်ကန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ယင်းအစားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့ကနေလောင်စာနို့စို့ထက်, dual-line ကိုရေပိုက်ပြန်မော်တာမှလောင်စာဆီတွန်းအားပေးရာ 4-7 PSI ကဖိအား, အအကြံပေးအဖွဲ့သို့လေကြောင်းညှစ်ထုတ်လိုက်။ အခြေခံအားဖြင့်ဤဖိအားင့်ကားများအနေနဲ့အလွန်အမင်းအန္တရာယ်များမီးသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဤအတင့်ကားများနှင့်မည်သို့အသစ်များနှင့်ဘေးကင်းလောင်စာလှောင်ကန်သို့ကူးပြောင်းရန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
ဒီ Project မှအကြောင်း comments